जलविद्युतमा नेपाली डायस्पोरा ! - Shikhar Post Shikhar Post
जलविद्युतमा नेपाली डायस्पोरा !
ऊर्जाखबर/काठमाडाैं । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म पहिलो नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच युद्ध भयो । लडाइँको अन्त्यतिर नेपाली कमान्ड सम्हालेका जनरल अमरसिंह थापा र ब्रिटिश साम्राज्यका जनरल डेभिड अक्टरलोनीबीच एउटा सम्झौता भयो । सम्झौताले नेपालीहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने ढोका खोल्यो । यही बेलादेखि नेपालीहरू भर्ती हुन विदेश जाने समयको सुरुवात भएको मानिन्छ ।
एनआरएनले भित्र्याएको लगानी देशमा विद्युत उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको छ । यो अझ दरिलो र फराकिलो हुँदै आएको छ । विद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि एनआरएन लगानी पुँजी निर्माणको बलियो आधार मान्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा सरकारले ठूला परियोजनामा एनआरएनलाई लगानी गर्ने वातावरण खुकुलो बनाओस् । यसले एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) पनि तानेर ल्याउँछ
प्रकाशित मिति : बुधबार, ८ माघ २०७६ १२:०६